Maamulka Gobolada Dhexe oo amaro dul dhigtay Warbaahinta ka shaqeysa deegaanada ay ka arimiyaan – STAR FM SOMALIA
Maamulka Gobolada Dhexe, ayaa awaamiir dul dhigay Warbaahinta ka howlgasha deeganada Maamulkaasi, sida ay shaaciyeen Saraakiil ka tirsan maamulkaas
Mursal Sheekh Maxamed Xeefoow oo ka mid ah Saraakiisha Maamulka Gobolada Dhexe, ayaa sheegay in Warbaahinta deeganada Maamulka Gobolada Dhexe maamusho ka howlgasha aysan baahin karin wararka ku saabsan ciidanka Maamulka Gobolada Dhexe.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in Warbaahinta aysan tabin karin wararka ku aadan tirada ciidanka, halka ay ku sugan yihiin, awood ahaan hubka ay haystaan iyo guud ahaan arimaha ciidanka ku saabsan.
“Marka la leeyahay Sirdoon ciidan waa arin Milateri ciidanka meesha degan inta uu la eeg yahay hubka ay haystaan iyo arimahaasi waad dareemi kartaa hadii Saxaafadda ay ka hadasho ciidan meel degan hubkaas ayey haystaan ay dhahdo Saxaafadda lafteeda uma roono dishbiliin ahaan, marka ma tabin karaan ilaa Maamulka ay kala soo xiriiraan.” Ayuu yiri Sarkaalkaan oo u waramay Idaacada Starfm.
Deeganada Gobolada Dhexe ee ay maamulaan waxa ku yaallo xarumo Warbaahineeda, waxaana hadalkaan Maamulka Gobolada Dhexe kasoo baxay uu noqonayaa mid saameyn ku yeesha xarumahaasi Warbaahineed.
Xoogaga hubaysan ee Somalia ku sugan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya Warbaahinta oo ku shaqeysa marxalad adag, marka loo eego qataraha ay la kulmaan Suxufiyiinta.
Lama oga sida uu ku dhaqangeli doono amarkaan Maamulka Gobolada Dhexe ay dul dhigeen Warbaahinta ka shaqeysa deeganada ay maamulaan